माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नाममा जरूरी पत्र | चितवन पोष्ट
गृह » माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नाममा जरूरी पत्र
कुनै बेला औलो रोगले मान्छे खाने ठाउँको रुपमा परिचित, कुनै बेला तोरीको जिल्लाको नामले परिचित त यतिबेला कुखुरापालन व्यवसायको राजधानीका रुपमा परिचित चितवन जिल्लाबाट तपाईं आउँदो निर्वाचनमा भाग लिने घोषणा गर्नुभएकोमा तपाईंलाई चितवनमा स्वागत छ, र बधाई पनि छ ! नेपालको राजनीतिमा शीर्ष तहका राजनेताहरु जुनजुन जिल्लामा छन्, ती जिल्ला भौतिक विकासका हिसाबले अघि बढेका प्रमाणहरु भेटिन्छन् । यो एउटा पाटो हो भने उपल्लो तहका नेताहरुको उपस्थिति सम्बन्धित जिल्लाका जनतालाई गौरवको विषय बन्न जान्छ, यो मामलामा फरक राजनीतिक विचार राख्ने नागरिकहरु समेत नरम हुन्छन् । फेरि तपाईंजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गरिसक्नुभएका नेतालाई जनताको अभिमतद्वारा अनुमोदित हुन जरूरी पनि हुन्छ । मनोनीत हुन सुहाउने कुरा होइन । समस्या कहाँनेर थियो भने यतिबेलाका तपाईंका घनिष्ट पार्टनर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डँडेलधुराबाट सधैँभरि चुनाव जित्ने अवस्था छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापाबाट जित्ने अवस्था छ । चुनाव जित्ने अवस्था भक्तपुरमा नारायणमान बिजुक्छे, इलामबाट झलनाथ खनाल, बागलुङबाट चित्रबहादुर केसी, तनहुँबाट रामचन्द्र पौडेलले चुनाव जित्ने अवस्था छ भने तपाईंजस्तो राष्ट्रभित्रका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक खेलाडीको चाहिँ कुनै एक भरपर्दो क्षेत्र थिएन । तपाईंले काठमाडौँमा चुनाव हार्नुभयो । मधेसतिरको गाँजेमाँजे राजनीतिमा तपाईंले चुनाव जित्ने निश्चित हुँदैन । रोल्पा ताक्ने हो भने तपाईंको भूतपूर्व राजनीतिक मित्र नेत्रविक्रम चन्दले त्यहाँ ज्यादा प्रभाव जमाएका छन् । यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिमा बुद्धि र चुतु¥याइँ प्रयोगका हिसाबले एक नम्बरका नेता तपाईंको जितका हिसाबले सुरक्षित क्षेत्र थिएन । तपाईंले चितवन रोज्नुभयो, ठीक गर्नुभयो तर त्यसमा पनि जटिल चुनौतीहरु छँदैछन् । ती चुनौतीहरुसँग तपाईं जुध्न पर्ने छ र सफलता हासिल गर्नुपर्ने छ । सायद, तपाईं चितवनको क्षेत्र नम्बर ३ बाट अब चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । यो क्षेत्र नेपाली कांग्रेसको पेवाजस्तै हो, धेरै जनता कांग्रेसलाई भोट दिनेवाला छन् । दोस्रोमा नेकपा एमाले छ, तपाईंको पार्टी माओवादी केन्द्र र विनासिद्धान्तको राजनीति गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी झन्डैझन्डै बराबरीमा छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंले चुनाव जित्न नेपाली कांग्रेससँगको अहिलेको प्रेमसम्बन्धलाई यथावत् राखेर कांग्रेसकै समर्थनमा चुनाव लड्नुपर्ने छ । सायद, यो काम तपाईंले शेरबहादुरसँग मिलेर खुसुक्क फत्ते गरिसक्नु भएको छ । तपाईंजस्तो बाठो नेताले यति हिसाब गर्नुभएको छैन भनेर पत्याउने अवस्था छैन । जे गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ । तर, यसका लागि माथि मिलाएर मात्र हुनेवाला छैन । चितवनका पुराना र यतिबेलाका जुझारू युवानेताहरुलाई तपाईंले मनाउन र फकाउन सक्नुपर्ने छ । अब तपाईंलाई शब्दद्वारा चितवनमा स्वागतपश्चात् केही सुझाव र सल्लाह दिने प्रयास गरिएको छ, ताकि तपाईंलाई भविष्यमा आत्मसन्तुष्टि मिलोस् र चितवनसहित नेपालका जनताले तपाईंबाट धेरैभन्दा धेरै लाभ हासिल गर्न सकून् ।
१. जनयुद्धको कुरा ः तपाईंहरुले तपाईको नेतृत्वमा २०५२ सालदेखि झन्डै १० वर्ष नेपालमा सशस्त्र युद्ध लड्नुभयो । हजारौँ नेपाली जनता मारिए । १० वर्ष नेपाली जनजीवन डर र त्रासमा बित्यो । विश्वका माझ कुनै बेला शान्ति क्षेत्र घोषणाको माग राख्ने नेपालमा त्यो खालको युद्ध होला भनेर कसैले पत्याएको थिएन । फेरि विश्वमा अहिंसा र शान्तिको सन्देश छर्ने गौतम बुद्ध जन्मिएको देशमा त्यो खालको मारकाट होला भनेर दुनियाँले पत्याउने कुरा पनि थिएन, तर युद्ध त भयो नै । फेरि अचम्म त के पनि भयो भने विश्व प्रमाण छ– तपाईंहरुले लडेजस्तो युद्धले या त सफलता हासिल गरेको छ या पूरै तहसनहस भएको छ । तर, नेपालमा न जित न हारको अवस्थामा ल्याप्चेमा गएर युद्ध टुंगियो । पछि बिस्तारै देश तंग्रिन थाल्यो । तपाईंहरुकै गड्याङगुडुङवाला राजनीतिक तौरतरिकाले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा हुन पुग्यो । अर्को एउटा अचम्म पनि के भयो भने विश्वमा राजतन्त्र समाप्त हुँदा राजा बन्दी बनाइएका छन् या विदेशमा शरण लिएर बसेका छन्, तर नेपालका राजाले खुरूक्क राजगद्दी छाडेर आफ्नो निजी घरतिर लागे । कुनै अप्रिय घटना घटेन । यो पनि दुुनियाँ छक्क पर्ने विषय बन्यो । तपाईंहरुको जनयुद्धले नेपाललाई घाटा पु¥याएको छ, परिवर्तनका हिसाबले नाफा दिएको छ तर अब आइन्दा यो देशमा त्यस्तो खालको युद्ध फेरि नहोस् भन्नेतर्फ कम्तीमा तपाईंजस्तो नेता सजग हुन जरूरी छ ।
२. कास्कीले जन्माएको र चितवनले हुर्काएको तपाईं ः प्रचण्डज्यू, तपाईंको जन्मकुण्डली अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ, तपाईं कास्की जिल्लामा जन्मिएर चितवनको माटोमा हुर्किनु भएको हो । चितवनले तपाईंमाथि निकै ठूलो लगानी गरेको छ । लगानी फिर्ताको हकमा तपाईंले चितवनको भौतिक विकासमा टेवा पु¥याउने विषय सामान्य हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नेतासमेत हुनुको नाताले तपाईंले सिंगो मुलुकलाई विकसित राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धामा पु¥याउन योगदान पु¥याउनु पर्ने छ । तपाईंसँग कम क्षमता छैन, तर एउटा मान्छेको क्षमतामात्रै राष्ट्रनिर्माण कार्यमा पर्याप्त हुन सक्दैन । राजा महेन्द्रको आइडिया पछ्याउनुस् । ती राजाले आफ्नो र आफन्त होइन, बुद्धिमान र सक्षम मान्छे खोज्थे र विकास कार्यमा लगाउँथे । राम्रो बुद्धि जोसँग लिए पनि हुन्छ । तपाईंलाई थाहा छ कि छैन कुन्नि, विश्वमा बुद्धि पनि खरिद–बिक्री हुन्छ । अमेरिकाले सोभियत संघका वैज्ञानिकहरुको बुद्धि किनेको प्रसंग तपाईंजत्तिको राजनीतिज्ञले बिर्सनु भएको छैन होला । अनेक कारणले नेपाल अविकसित राष्ट्रका रुपमा रहेको तपाईंलाई थाहै छ । यसको अलावा, कहिलेकाहीँ अरुको कारणले पनि हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौं । यस्तो अवस्थामा तपाईंजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत निर्माण गरेका नेपाली नेताको खाँचो पर्छ । केही दिनअघिमात्रै भारत र चीनबीच लडाइँ होला होला जस्तो भएको थियो । युद्धमा जाँदा दुवैलाई नोक्सानी हुने थाहा पाएरै होला, दुवै देश पछि हटेका छन् । पछि हटेको अर्थ भारत र चीनबीच मेलमिलाप भयो भन्ने होइन, फेरि पनि तनाव हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल तटस्थ बस्ने भन्ने नाममा छिमेकी–छिमेकीबीचको लडाइँ हेरेर बस्ने होइन । यसो गर्दा नेपाललाई सबै कोणबाट नोक्सानी हुन्छ । नेपालले भारत र चीनलाई कुनै पनि हालतमा लडाइँमा जान दिन हुन्न । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएर दुई देशका बीचमा शान्तिको झन्डा फहराउनुपर्छ । यसो गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कायम हुन्छ भने चीन र भारतले पनि मनमनै धन्यवाद भन्न कर लाग्छ । यो भूमिका नेपालका तर्फबाट तपाईंले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ ।
३. असफल प्रधानमन्त्रीत्व काल ः तपाईंको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व काल पूरै असफल भएको तपाईंले महसुस गर्नुभएकै होला । विकास निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरुसँग आइडिया लिनुपथ्र्यो । जनयुद्ध हाँकेको अनुभवचाहिँ भएको तर जिन्दगीमा पहिले पहिले जनप्रतिनिधि भएर काम गरेको अनुभव नभएको तपाईं एकैपटक ठाडै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लिनु भयो । के गर्ने र कसो गर्ने, तपाईंलाई केही मेसो भएन । रूक्मांगद कटवाल र पशुपतिको पूजारी काण्डजस्ता वाहियात काण्डमा फस्नुभो । यस्तै अनुभव नहुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अरुको लहैलहैमा लागेर निजीकरणको नाममा देशका सबै उद्योग कलकारखाना कौडीको भाउमा बेच्दा आजसम्म मुलुक उद्योगधन्दाविहीन भएको तथ्य तपाईंले थाहा पाउनुभएकै होला । फुर्सद मिल्यो भने चितवनसँग जोडिएको नवलपरासीको गैँडाकोट जानुस् र कुनै बेला सयौँ नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिएको र कागजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्दै गरेको भृकुटी कागज कारखानाको हरिबिजोग आफ्नै आँखाले हेर्नुस् । यसबाट तपाईंलाई भविष्यमा देशका लागि काम गर्न नयाँ आइडिया फुर्ने छ ।
४. माओत्सेतुङ, महात्मा गान्धी र तपाईं ः तपाईं आफैँ माओवादी अर्थात् सत्ता र शक्ति बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ भन्ने विचार बोक्ने माओत्सेतुङको चेला । त्यो चिन्तन सधैँभरि ठीक हुन्छ र लागू हुन सम्भव छ भन्ने कुरा साँचो होइन भन्ने कुरा त थाहा पाइसक्नु भएकै छ । तपाईंले बोकेको बन्दुकले तपाईंलाई सत्ता दिएन । बन्दुक फालेपछि मात्रै तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी प्राप्त भयो । त्यसकारण, आउने दिनमा तपाईंले चीनमा माओले जेजे गरे, त्यस्तै पारा दोहो¥याउने कहीँकतै सोच्नुभयो भने फाइदाजनक हुनेछैन । माओमात्रै होइन, तपाईंले महात्मा गान्धीबारे पनि अध्ययन गर्नुभएकै छ । महात्मा गान्धीले कहिल्यै पदको लोभ गरेनन्, लिनेभन्दा दिनमै आनन्द माने । त्यसकै परिणामस्वरुप आज महात्मा गान्धीको समाधिस्थलमा अमेरिकाका शक्तिशाली राष्ट्रपतिदेखि विश्वका बडेबडे नेताहरु भारत जानेबित्तिकै माला चढाउने गर्छन् । तपाईं एकबारको जुनीमा दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भैसक्नुभयो । फेरि अहिले तपाईं भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । फेरि भए फेरि पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । अब त्यो पद तपाईंले किन ताक्ने ? अब तपाईंको लोभ एकबारको जुनीमा कार्यकारी राष्ट्रपति हुने देखिन्छ । यो फोकटको लोभ तपाईंले अब छाड्दा हुन्छ । अब पदमा नबसीकनै जनताको सेवा गर्नुस् । लोभले मानिसलाई दुःखसिवाय अरु दिँदैन । अब तपाईं आफ्नो जीवन सफल बनाउन चाहनुहुन्छ भने सांसद् पदसम्म केही फरक पर्दैन, तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पद ताक्न छाडिहाल्नुस् ।
५. आफ्नो क्षमता थाहा पाउनुस् ः तपाईं साधारण मान्छे होइन । एक जमानाका राजा महेन्द्र, मदन भण्डारी, पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर राणासँग तपाईंको स्वभाव कतै न कतै मिलेको देखिन्छ । आफूलाई चिन्नुस् । सफल र असफल आफ्नै ठाउँमा छ । भारत र चीनजस्तो विशाल छिमेकी मुलुकहरुसँग तपाईंले आफ्नै तरिकाले ट्याकल गर्नुभयो । तपाईंको निर्णय वा व्यवहारले नेपाललाई कतैकतै घाटा पनि भएको हुनसक्छ, तर गलत गर्नेसँग ठीक गर्ने क्षमता पनि हुन्छ । भविष्यमा ठीक गर्ने प्रयास गर्नुहोला । मुलुकभित्र कुनै बेलाका खतरनाक राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतलाई थाङ्नामा सुताएर आफ्नो पार्टीलाई एक नम्बरको बनाउन सक्ने तपाईंले यतिबेला तेस्रो नम्बरको आफ्नो पार्टीलाई शेरबहादुर देउवासँग अँगालो हालेर शक्तिशाली सावित एमालेलाई साइजमा ल्याउने र पार्टीलाई अघि बढाउने तपाईंको चतुर नीतिलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ । यो र यस्तो क्षमता आजसम्म कुनै नेपाली राजनीतिज्ञले प्रस्तुत गरेका थिएनन् । सूर्यबहादुर थापालाई इतिहासमा सबैभन्दा चतुर राजनीतिज्ञ भन्ने विश्लेषकहरु पनि वाह ! प्रचण्ड वाह !! भन्न थालिसकेका छन् । तर, यतिबेला तपाईंको कांग्रेससँगको मिलापलाई दक्षिणतिरको इशारामा भएको भन्नेहरु पनि बग्रेल्ती छन्, विचार गर्नुहोला ।
६. छोरी रेणुको प्रसंग ः भरतपुर महानगरप्रमुख रेणु दाहालमा आफ्नै खाले क्षमता भए पनि तपाईंको नाम र ख्यातिले उनलाई छोपेको छ, अर्थात् रेणु दाहाल भन्दा “प्रचण्डकी छोरी भरतपुरको मेयर” भन्ने भनाइ जनमानसमा झुन्डिएको साँचो हो । अब तपाईंको नाम नै अगाडि आएपछि तपाईंले भरतपुर महानगरको विकासलाई चर्चा र प्रशंसा लायक बनाउन मेहनत गर्नैपर्ने भएको छ, ध्यान पु¥याउनुहोला ।
७. बाटो निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा जोड ः देश विकासको मेरूदण्ड सडक हो । कार्यकारी अधिकार हातमा लिने जोसुकै भए पनि तपाईंको पहुँच पुग्छ । देशभरि सडक निर्माणका लागि कम्मर कस्नुस् । नयाँ सडक बनाउने र मर्मत गर्ने कार्यमा आफ्नो दिमाग खर्च गर्नुस् । मुलुक उत्पादनशून्य भएर पूरै भारतनिर्भर भइसकेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने क्षमता तपाईंमा देखिएको छ । जनतालाई खेतीपातीमा आकर्षित गर्नुस् । विदेशमा गएका नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश बोलाउनुस् । नेपाली उत्पादनलाई विदेश निर्यात गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुस् । एकबारको जुनीमा यदि तपाईंले यति गर्न सक्नुभयो भने तपाईंको फोटो सिंहदरबारमा मात्रै होइन, जनताको घरघरमा समेत झुन्डिने छ ।
८. कम्तीमा जनतालाई पानी निःशुल्क दिनुस् ः प्रचण्डज्यू, नेपाल सरकार व्यापारी र जनता ग्राहक भएको अवस्था छ । सरकारले जनतालाई आजसम्म केही चीज निःशुल्क दिएको छैन । तपाईंले पहल गरेर कम्तीमा यो देशका जनतालाई पानी पिएबापत् पैसा तिर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनुस्, कम्तीमा पानी जनताले निःशुल्क पिउन पाऊन् । यदि तपाईंले यो पुण्यकर्म गरिदिनुभयो भने जसरी एमालेले “वृद्धभत्ता” नामको कामले जिन्दगीभरि खाइरहेको छ, तपाईंलाई पनि “निःशुल्क पानी” ले जिन्दगीभरि उँचा बनाइराख्ने छ ।
९. आफ्नै सुरक्षामा ध्यान दिनुहोला ः तपाईंले जनयुद्ध सञ्चालन गर्दा कतिपय निर्दोष नागरिक पनि मारिएका छन् । तिनको परिवार र नातापाता तपाईंसँग खुशी छैनन् । त्यसमाथि, तपाईं देश र जनताका लागि केही गर्न सक्ने हैसियत भएको नेता । देशबाहिरकाले पनि षड्यन्त्र गर्न सक्छन् । देशभित्रै तपाईंका बारे चर्चा चल्दा “प्रचण्ड बिरामी भएको खबर सुन्दा खुशी हुने, बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको खबर प्राप्त भए छमछमी नाच्ने र तल–माथि नै भएदेखि १० वटा खसी काटेर भोज खाने” भन्ने मानिसहरु पनि यही समाजमा छन् । तपाईं यो देशलाई चाहिने नेता भएको हु्ँदा सबै खाले अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आफ्नै सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नुहोला । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, म सामान्य नागरिक हुँ । यी शब्दहरुमार्फत तपाईंलाई सल्लाह दिनु मेरो कर्तव्य हो । मैले मेरो कर्तव्य मात्र पूरा गरेको हुँ । यी शब्दहरु तपाईंको नाममा लोकप्रिय दैनिक चितवन पोष्टमार्फत लेख्दा मैले कसैलाई होच्याउने, पछार्ने, चाकडी गर्ने, फुक्र्याउने गरेको छैन । कसैकसैलाई बुझाइमा तल–माथि हुनसक्छ, त्योचाहिँ मेरो जिम्मेवारी होइन । मेरा सल्लाहहरु उपयोगी लागे कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर हुनुहोला, नलागे पनि म मेरो कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने छु । धन्यवाद ।
– पत्रकार वीरेन्द्रमणि पौडेल
श्राद्ध : पितृका उद्देश्यले गरिने सत्कर्म